စက်တင်ဘာထာဝရ: အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေထိုင်ပြီး ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ အဆောင်ကို တက္ကသိုလ်ရဲ့ စိန်ရတုသဘင်ကာလမှာ ပြည်သူလူထု သိရှိအောင် ဖော်ပြမထားတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ? ကျွန်မက မှန်တာပြောရရင် ဒီကိစ္စတွေကို လိုက်ပြီးတော့ မစုံစမ်းဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်မပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ အရင်တုန်းကလဲ ပြောထားပြီးသားပဲ၊ ဖေဖေရဲ့ အဓိက နေရာကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသဲနှလုံးထဲမှာပဲ။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေထိုင်ပြီး ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ အဆောင်ကို တက္ကသိုလ်ရဲ့ စိန်ရတုသဘင်ကာလမှာ ပြည်သူလူထု သိရှိအောင် ဖော်ပြမထားတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ? ကျွန်မက မှန်တာပြောရရင် ဒီကိစ္စတွေကို လိုက်ပြီးတော့ မစုံစမ်းဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်မပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ အရင်တုန်းကလဲ ပြောထားပြီးသားပဲ၊ ဖေဖေရဲ့ အဓိက နေရာကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသဲနှလုံးထဲမှာပဲ။
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 10:33 PM